Quruxda-Mareykan-Quruxda: Nina Simone waa heesta Mareykanka, gabyaa-qoraa, duruus, qaban-qaabiyayaal, iyo u ololeeya xuquuqda madaniga ah oo ka soo shaqeysay noocyo fara badan oo miyuusik ah oo ay ku jiraan midab, jazz, buluug, dad, R&B, injiil iyo wacdi pop | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 5, 2017 00: 01 No Comments
Waxay ku dhalatay North Carolina, oo ah cunugga lixaad ee wacdiye, Simone wuxuu rajeynayaa inuu noqdo muusig riwaayad… Iyada oo gacan ka heleysa dhowr taageerayaal ah oo ku nool magaaladeeda Tryon, North Carolina, ayay iska diiwaangelisay. Iskuulka muusikada Juilliard ee magaalada New York.
Waligey isma badalin.
Weligey isma bedelin timaheyga.
Weligey ma bedelin midabkeyga.
Weligey waan ku faani jiray naftayda.
Taageerayaasheyda ayaa igu faani kara inaan sii joogo sidii aan ahaan jiray.
By, Nina Simone
Haddii madowga Koonfur Afrika aysan ahaan lahayn jahwareer, erayga “Xenophobia” ma jiri doono… (VIDEO)
Sep29 02: 42